အိမ်စာမျက်နှာ / ကောဆောထောချောနှင့် ပတ်သက်သော / တာဝန်ယူမှု
ရုပ်သံလိုင်း၏တိုင်းဒေသရုံး (တိုင်းနံပါတ် ၁ ဘန်ကောက်၊ တိုင်းနံပါတ် ၅ ချန်တဘူရီ၊ တိုင်းနံပါတ် ၁၅ ဆူဖန်းဘူရီ၊ တိုင်းနံပါတ် ၁၆ ပရာကျင်ဘူရီခရိုင်) ဒေသများ၏ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသောလိုင်စင် ထုတ်ပေးမှုလုပ်ငန်းများ၊ဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ဥပဒေနှင့်မညီမျှသော အသံလွင့်လုပ်ငန်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သော ဆောင်ရွက်ချက်များကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုနှင့် ထိန်း ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည်၊ ထို့အပြင် အလယ်ပိုင်းဒေသရှိပြည်သူလူထု၊ သုံးစွဲ သူများ၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် တိုင်ကြားမှုများမြှင့်တင်ရန်နှင့် အခြားတာဝန်ပေး အပ်ခြင်းခံရသောလုပ်ငန်းများ၏ဆောင်ရွက်မှုများပါဝင်သည်။
ရုပ်သံလိုင်း၏တိုင်းဒေသရုံး (တိုင်းနံပါတ် ၂ အူဘုန်းရာ့တ်ချဌာနီ၊တိုင်းနံပါတ် ၆ ခေါင်ကဲန်၊တိုင်းနံပါတ် ၇ နခွန်းရာ့တ်ချဆီမား၊ တိုင်းနံပါတ် ၈ အူဒွန်းဌာနီ) ခရိုင်ဒေသများ၏ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသောလိုင်စင် ထုတ်ပေးမှုလုပ်ငန်းများ၊ဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ဥပဒေနှင့်မညီမျှသော အသံလွင့်လုပ်ငန်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သော ဆောင်ရွက်ချက်များကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုနှင့် ထိန်း ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည်၊ ထို့အပြင် အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသရှိပြည်သူလူထု၊ သုံးစွဲသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခွင့်အရေးနှင့်တိုင်ကြားမှုများမြှင့်တင်ရန်နှင့်အခြားတာဝန် ပေးအပ်ခြင်းခံရသောလုပ်ငန်းများ၏ဆောင်ရွက်မှုများပါဝင်သည်။
ရုပ်သံလိုင်း၏တိုင်းဒေသရုံး (တိုင်းနံပါတ် ၃ လမ်းပန်း(င်) ၊တိုင်းနံပါတ် ၉ ချိန်းမိုင်၊တိုင်းနံပါတ် ၁၀ ဖိဆနူးလုတ်၊တိုင်းနံပါတ် ၁၇ ချိန်းရိုင်း) ခရိုင်ဒေသများ၏ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသောလိုင်စင်ထုတ်ပေး မှုလုပ်ငန်းများ၊ဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ဥပဒေနှင့်မညီမျှသော အသံလွင့်လုပ်ငန်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သော ဆောင်ရွက်ချက်များကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည်၊ ထို့အပြင် မြောက်ပိုင်းဒေသရှိပြည်သူလူထု၊ သုံးစွဲသူများ၊ သက် ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခွင့်အရေးနှင့်တိုင်ကြားမှုများမြှင့်တင်ရန်နှင့်အခြားတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသော လုပ်ငန်းများ၏ဆောင်ရွက်မှုများပါဝင်သည်။
ရုပ်သံလိုင်း၏ အပိုင်း ၄ တိုင်းဒေသရုံး
ရုပ်သံလိုင်း၏တိုင်းဒေသရုံး (တိုင်းနံပါတ် ၄ ဆုန်ခလာ၊ တိုင်းနံပါတ် ၁၁ ဖူးခက်၊ တိုင်းနံပါတ် ၁၂ နခွန်းဆီ ထမ်မရာ့တ်၊ တိုင်းနံပါတ် ၁၃ ရနောင်း၊ တိုင်းနံပါတ် ၁၄ ချွန်း(မ်)ဖွန်း) ခရိုင်ဒေသများ၏ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသော လိုင်စင်ထုတ်ပေးမှု၊ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သော အသံလွင့်လုပ်ငန်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းနှင့် ဆက် သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင်ပတ်သက်သော ဆောင်ရွက်ချက်များကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည်၊ ထို့အပြင် တောင်ပိုင်းဒေသရှိပြည်သူလူထု၊သုံးစွဲသူများနှင့်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် တိုင်ကြားမှုများမြှင့်တင်ရန်နှင့်အခြားတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသောလုပ်ငန်းများပါဝင်သည်။
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်း အတွင်းပိုင်းဌာန၏ ခန့်မှန်းငွေ၊ လူ့အရင်းအမြစ်၊
စာအိတ်၊ စာရွက်စာတမ်းဟောင်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၊
မိတ်ဆက်ခြင်းများအပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းများ ဆက်ဆံပေးခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုကို ကောဆောထောချော (သို့)
ကောဆောထောချောဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော ဥပဒေအတိုင်းပြုလုပ်ရန်နှင့် လွဲအပ်ခံရသော
အခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများတွင်
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ မော်ဒယ်အစီအစဉ်၊ မဟာဗျူဟာမြောက်အစီအစဉ် နှင့်
လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းမှတ်တမ်းများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ယှဉ်ပြိုင်မှုတွင်
လမ်းညွှန်ချက်နှင့်ကြီးကြပ် စောင့်ရှောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ စီမံခြင်း
အချက်အလက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့်
လွဲအပ်ခံရသော အခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သော
နည်းလမ်းနှင့်ညွှန်ကြားချက်များ သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ၀န်ဆောင်မှုခများကို
ကြီးကြပ်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် လွဲအပ်ခံရသော
အသံလိုင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်သောအချက်အလက်များ ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း၊ နည်းလမ်းပိုင်း
ရေဒီယိုအသံလိုင်းအစီအစဉ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းပိုင်း
အသံလိုင်းအသုံးပြုခြင်းကို ဆက်စပ်ပေးခြင်း နှင့် လွဲအပ်ခံရသော
သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့် ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း၊
ဆက်သွယ်ရေးနံပါတ်အသုံးပြုခြင်း အစီအစဉ်၊ ရှာဖွေမှု နှင့် ကြီးကြပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း နှင့်
ပတ်သက်သော နည်းလမ်းနှင့်ညွှန်ကြားမှုများကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လွဲအပ်ခံရသော အခြားသော
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများတွင်
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း
လေ့လာခြင်း၊ နည်းလမ်းနှင့်ကန့်သတ်ချက်ညွှန်ကြားချက် ပြုလုပ်ခြင်း၊
တက်နိုလော်ဂျီအသစ်အသုံးပြုသော ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု ခွင့်ပြုချက်အစီအစဉ်နှင့်
အရေးကြီးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လွဲအပ်ခံရသော
၇. တိုင်ကြားမှုလက်ခံခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရှိသုံးစွဲသူများ စောင့်ရှောက်ဌာန
စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော နည်းလမ်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြည်သူလူထုများ
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရှိ ၀န်ဆောင်မှုနှင့်အသံလိုင်းအသုံးပြုခြင်း အကျိုးရရှိစေရာတွင်
တန်းတူရရှိခြင်း အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်ခြင်းများကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊
လုပ်ငန်းရှင်နှင့်သုံးစွဲသူအကြား အငြင်းပွားမှုကို ရပ်တန့်ပေးခြင်း၊
ညွှန်ကြားပေးခြင်း နှင့် လွဲအပ်ခံရသော အခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ
စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများတွင် တာဝန်ရှိသည်။
အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ကောထောခေါ၏အစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်း နှင့်
ကောထောခေါ၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သော အစည်းအဝေး လုပ်ဆောင်ခြင်း၊
ကောထောခေါ၏ငွေကြေးရေးနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းပိုင်း ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်
ညွှန်ကြားမှုပေးခြင်း နှင့် လွဲအပ်ခံရသော အခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ
ကွန်ယက်ရှိဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း စီမံခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း သုံးသပ်ခြင်း၊
ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဖြစ်စေရန်နှင့်ပတ်သက်သော ဆွေးနွေးမှု၊ စောင့်ကြည့်မှု နှင့် စစ်ဆေးမှု၊
ထင်မြင်ချက်ပေးခြင်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်များပူးပေါင်းပြုလုပ်ခြင်း နှင့် လွဲအပ်ခံရသော
အခြားသောလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းများ စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သော
ကွန်ယက်မရှိဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း စီမံခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း သုံးသပ်ခြင်း၊
ဆက်သွယ်ရေးပိုင်းအမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲခြင်း၊
မူကြမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဥပဒေဖွံ့ဖြိုးပေးခြင်း၊ စာချုပ်(သို့)သဘောတူချက်များကို
သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သော ဥပဒေအချက်များကို
ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးချက်ပေးခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအယူခံအမိန့်များ လက်ခံခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း
ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းနှင့်ဆက်ဆံသော အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဥပဒေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော
ပြဿနာများကိုသုံးသပ်ပေးခြင်း နှင့် လွဲအပ်ခံရသော အခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဥပဒေ နှင့် ပတ်သက်သည့်အခြားသောဥပဒေအရ
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ပြစ်မှုပြုလုပ်သူကို တရားစွဲဆိုခြင်း နှင့် လွဲအပ်ခံရသော
ညွှန်ကြားချက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း လိုင်းစီမံခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုစာထုတ်ခြင်း
သုံးသပ်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားသောခွင့်ပြုချက် ကန့်သတ်ချက်နှင့်ညွှန်ကြားမှုအတိုင်းဖြစ်စေရန်
အမျိုးမျိုးသောရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များနှင့် ဆက်စပ်ခြင်း နှင့် လွဲအပ်ခံရသော
၁၄. ပြည်သူလူထုအတွက်နှင့်ကျယ်ပြန့်သော ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုဌာန
ပြုလုပ်သော အစီအစဉ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပတ်သက်သည့်ဌာနများနှင့်ဆက်စပ်ခြင်း
တိုင်းတာချက်နှင့်တိုးမြှင့်ခြင်း သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြည်သူလူထုအတွက်နှင့်ကျယ်ပြန့်သော
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု ဖြန့်ခြင်းခန့်မှန်းခြေ ကြီးကြပ် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်း နှင့်
လွဲအပ်ခံရသော အခြားသောလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းများ စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သော
ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းအခကြေးငွေများ နှင့် ပတ်သက်သော
ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်စောင့်ရှောက်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်များပြုလုပ်ခြင်း၊ နှင့် လွဲအပ်ခံရသော
ဆက်သွယ်ရေးလူပုဂ္ဂိုလ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် စံချိန်သတ်မှတ်ခြင်း၊
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သင်တန်းများပေးခြင်း နှင့်
အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်း အတွင်းပိုင်းဌာန၏ ခန့်မှန်းငွေ၊
လူ့အရင်းအမြစ်၊ စာအိတ်၊ စာရွက်စာတမ်းဟောင်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၊
မူဝါဒ၊ ပညာရပ်၊ သုတေသန၊ နှင့်
လုပ်ငန်းရှင်များဆောင်ရွက်ရန် ဆက်ဆံပေးခြင်း၊ မူဝါဒနှင့်ပညာရပ်ပိုင်း
ထင်မြင်ချက်နှင့်ညွှန်ကြားချက်ပေးခြင်း၊ နိူင်ငံအကြားဌာနနှင့် အသံလွှင့်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်း
ဆွေးနွေးပေးခြင်း၊ စီမံမှုအတွက် အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား အချက်အလက်များ ပြုလုပ်ခြင်း၊
ကောဆောထော၏ နှစ်ချုပ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမှတ်တမ်းပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဖော်ပြခြင်း နှင့်
ညွှန်ကြားမှုသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အခကြေးငွေလုပ်ငန်းပိုင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုစာကြေး
လျှော့ပေးခြင်း(သို့) ကင်းလွတ်ပေးခြင်း၊ အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်း
၀န်ဆောင်မှုခများကို ကြီးကြပ်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း၊ အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကို
ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှုကြောင့် ပေးဆပ်သော ပေးအပ်ငွေ၊
အသံလိုင်းလေလံတင်ကြေးကို ခန့်မှန်းပေးခြင်း နှင့် လွဲအပ်ခံရသော
အချက်အလက်များကို လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့် ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း၊
ရေဒီယိုလိုင်းအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခြင်း၊ အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းရှိ ရေဒီယိုလိုင်းကို
စီစဉ်ပေးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ပေးခြင်း၊ အသံလိုင်းအသုံးပြုသော လုပ်ငန်းအတွက် နည်းပညာပိုင်း
စံချိန်နှင့်လက္ခဏာများကို ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းရှိ
စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ထင်မြင်ချက်ပေးခြင်း နှင့် လွဲအပ်ခံရသော
စစ်ဆေးခြင်း၊ နည်းပညာပိုင်းလက္ခဏာများကို သုံးသပ်ခြင်း နှင့်
စံချိန်ကိုထောက်ခံပေးခြင်း၊ နည်းပညာပိုင်းဆွေးနွေးချက်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊
တီထွင်အသစ်နည်းပညာများကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ အင်ဂျင်နီယာပိုင်း ပညာရပ်နှင့်သင်တန်းများ
ပေးခြင်း၊ အသံလိုင်းအသုံးမပြုသောလုပ်ငန်းရှိ နည်းပညာပိုင်း စံချိန်နှင့်လက္ခဏာများကို
ပြုလုပ်ပေးခြင်း နှင့် လွဲအပ်ခံရသော အခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ
ရုပ်မြင်သံကြားအားဒီဂျစ်တယ်စနစ်နှင့် သယ်ယူနိူင်ရုပ်မြင်သံကြားအား ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့
ကူးပြောင်းပုံများနှင့် ပတ်သက်သော မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် နှင့် ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခြင်း၊
ရုပ်မြင်သံကြားအားဒီဂျစ်တယ်စနစ်နှင့် သယ်ယူနိူင်ရုပ်မြင်သံကြားအား ဒီဂျစ်တယ်စနစ်အဖြစ်
ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ခြင်း ဆက်စပ်ပေးခြင်း၊ ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ရှိ
ကြီးကြပ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် လွဲအပ်ခံရသော အခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ
၇. အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းရှိသုံးစွဲသူများ စောင့်ရှောက်ဌာန
သုံးစွဲသူ နှင့် လုပ်ငန်းရှင်မှခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းမခံရစေသော သုံးစွဲသူများအခွင့်အရေးများ
စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော နည်းလမ်း၊ တိုင်းတာချက် နှင့်လုပ်ဆောင်မှုများ၏
ညွှန်ကြားချက်သတ်မှတ်ခြင်း၊ သုံးစွဲသူ၏လုပ်နိူင်စွမ်းရည်များကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ မသန်စွမ်းသူ
အိုမင်းသူ နှင့် ချို့တဲ့သူများ အသံလွှင့်ခြင်းနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းရှိ
သတင်းအချက်အလက်များ အကျိုးရရှိခြင်းနှင့်ရယူခြင်းများတွင် တန်းတူရရှိခြင်း
အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်ခြင်းများကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ တိုင်ကြားချက်များကိုသုံးသပ်ပေးခြင်းနှင့်
သုံးစွဲသူကို ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းဖြစ်သော ငြင်းခုံမှုများကို ရပ်တန့်ပေးခြင်း၊
ကော်မတီခွဲအဖွဲ့၏လက်ထောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် လွဲအပ်ခံရသော
ကောဆောထော လက်ထောက်အပိုင်း ညွှန်ကြားမှုပေးခြင်း၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းနှင့်
ကောဆောထော၏ အစည်းအဝေးနှင့် ကောဆောထောလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သော
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ခွဲခြားခြင်း နှင့် လွဲအပ်ခံရသော အခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ
ခွင့်ပြုခြင်း ညွှန်ကြားချက်၊ နည်းလမ်း၊ ကန့်သတ်ချက်များပြုလုပ်ခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်း၊
ခွင့်ပြုခြင်း၊ အစီအစဉ်များနှင့် သဘောတူခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးမှုပေးခြင်း
နှင့် အသံလွှင့်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်သော အခြေခံအချက်အလက်များကို
ခွင့်ပြုချက်သတ်မှတ်သော ညွှန်ကြားမှုနှင့်ကန့်သတ်ချက်အတိုင်း ဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်
လွဲအပ်ခံရသော အခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သော
နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်သော အခြေခံအချက်အလက်များကို
၁၁. ကွန်ယက်၊၀န်ဆောင်မှုများနှင့် ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးစက်ကိရိယာလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုခွင့်ပြဌာန
ခွင့်ပြုခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးမှုပေးခြင်း နှင့်
ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ရှိရေဒီယိုအသံလွှင့်ခြင်း၊ ကွန်ယက်၊ ၀န်ဆောင်မှုများ၊
လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်သော အခြေခံအချက်အလက်များကို
ခွင့်ပြုချက်သတ်မှတ်သော ညွှန်ကြားမှုနှင့်ကန့်သတ်ချက်အတိုင်း ဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ခွင့်ပြုချက် ခွင့်ပြုခြင်း (သို့)စာချုပ်၏ ခွင့်ပြုချက်အရ အသံလိုင်းအသုံးပြုရန်လိုအပ်ခြင်းများကို
သုံးသပ်ပေးခြင်း နှင့် လွဲအပ်ခံရသော အခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ
အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားပိုင်းအမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲခြင်း၊
စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းခြင်း၊ အသံလိုင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော
ဥပဒေတင်းကြပ်အသုံးပြုခြင်း၊ အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းတွင် ပြစ်မှုပြုလုပ်သူများကို
အမှုစွဲဆိုခြင်း နှင့် လွဲအပ်ခံရသော အခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ
မူဝါဒဖွံ့ဖြိုးခြင်း၊ ညွှန်ကြားမှုသတ်မှတ်ခြင်း၊ အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းတွင်
ကာကွယ်ခြင်းညွှန်ကြားချက်များတင်းကြပ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ချုပ်နှောင်ခြင်း နှင့်
လုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ခြင်း ပြဿနာများဖြေရှင်းခြင်းများကို ထောက်ပံ့ခြင်း၊
တိုင်ကြားချက်များကို ထင်မြင်ချက်ပေးခြင်းနှင့် လွဲအပ်ခံရသော
ခွင့်ပြုချက်ရရှိသူ၊ အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်သူ နှင့် သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သူများ
အုပ်စုပေါင်းခြင်းကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးခြင်းရှိအောင်တိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊
ကျယ်ပြန့်သော အသံလိုင်းနှင့် အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဝန်ဆောင်မှုများကို
အသုံးပြုခြင်းအကျိုးကြောင့် ပြည်သူလူထုများ သတင်းအချက်အလက်များလက်ခံရရှိခြင်း၏
လွတ်လပ်မှုအခွင့်အရေးနှင့်တန်းတူညီတူမှုများကို တိုးမြှင့်ပေးသော နည်းလမ်းများကို
သတ်မှတ်ပေးခြင်း နှင့် လွဲအပ်ခံရသော အခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ
၁၆. အစဉ်အစီဇယားနှင့်ဖျော်ဖြေမှုကြီးကြပ်ခြင်း နှင့် အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းရှိကြေညာသူဖွံ့ဖြိုးခြင်းဌာန
အစီအစဉ်ဇယားနှင့်ပတ်သက်သော တိုင်းကြားချက်များကို ကြီးကြပ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊
စစ်ဆေးခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း၊
ကြေညာသူများ၏ စံချိန်များဖွံ့ဖြိုးခြင်း နှင့် လွဲအပ်ခံရသော